Qaybta 1. Waxaa ugu 2 suuqyada caan ah oo ay u soo iibsadaan Android Apps
Dukaanka Google Play waa meesha ugu fiican ee meesha aad ka heli karto Android Apps u qalab aad. Waxaad isticmaali kartaa https://play.google.com/store ama Google Play App ka qalab aad, inta badan xaaladaha horeba lagu rakibay qalabka cusub Android.
Ayaa sii daayo kowaad wuxuu ahaa on October 2008, waxaana ilaa iyo hadda in 2015 ay jiraan in ka badan 1 430 000 barnaamijyadooda daabacay Store. Waxa uu sheegay in ay yihiin 1 200 000 Chine oo lacag la'aan ah oo ku saabsan 200 000 oo Chine waxaa la bixiyaa. The majaladaha online News, shirkadaha kala duwan in ay iska iibiso alaabta ama adeegyada ay, sida caadiga ah waxaa lagu bixiya ay app for free iyada oo ujeedadu tahay in ay fududahay in la isticmaalo on qalabka android. Sidoo kale, waxaa jira dad badan oo Chine in la isticmaalo waqtiga firaaqada iyo farxad sida kulan, music, buugaagta.
Dukaanka Amazon App kuu ogolaanaysaa inaad ka heli, dejisan iyo rakibi nooc kala duwan ee Dalka Chine. Sii daayo hore waxa ay aheyd March 2011 iyo ilaa maalmahaas 2015 waxaa jira in ka badan 330 000 oo Chine. Haddii aad qabto app ee qalabka android aad, waxaad kala soo bixi kartaa halkan:
Waxaa jira qaybaha badan ee Chine, oo lacag la'aan ah oo la bixiyey. Laakiin feature ugu fiican waa in aad ka heli karto app a bixisay lacag la'aan ah, oo maalin kasta.
Qaybta 2. Sida loo bixiyo - laba siyaabood
Haddii aad rabtid in aad ka iibsan app ka Google Play Store, waa in aad gasho in aad xisaabta Google iyo haddii ay tahay markii ugu horeysay markii aad isticmaasho feature bixinta, waa in aad si geli faahfaahinta la xidhiidha Creditcard.
Oo daaqadaha soo socda, waxaa lagugu soo wargalin doonaa ku saabsan app rukhsadda. Waxaad dooran kartaa qalabka meesha aad rabto in aad kala soo bixi app.
2. via biilka mobile
Fursada Card Credit in ay bixiyaan barnaamijyadooda ma aha habka kaliya ee iibsan barnaamijyadooda. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah hab sahlan in lagu bixiyo Chine waa biilka mobile iyo qiimaha uu ku daray in biilkaaga bisha ama laga qaado mushaharka aad sida aad u tagto credit.
Qaybta 3. Sida loo badbaadiyo lacag aan soo iibsano barnaamijyadooda Android
Mid ka mid ah Dhab ahaantii si fiican u yaqaan waa in qof kasta oo doonayo in lagu badbaadiyo lacagta iyo lacag badan intii suurto gal ah, in dhinac kasta oo nolosha, laakiin sidoo kale dabcan u soo iibsan lahaayeen barnaamijyadooda qalabka our Android. Taasi waa wax fiican, isn`t? Malaha sida ugu wanaagsan si loo badbaadiyo lacag waa inaad kala soo baxdo barnaamijyadooda lacag la'aan ah. Laakiin xaalado badan, version la casriyeeyay ee app ah ama aan ahayn oo keliya version demo la qaababka aad u yar ayaa qiimo. Waxaad ka heli kartaa barnaamijyadooda laga bilaabo $ 0.99 iyo haddii aan ka hadlo kulan, qiimaha la kordhiyo kulan la iibsado alaabo kala duwan oo aynu ku horumarin aad dhakhso heerarka game`s ah. Waxaa laga yaabaa in aad tahay nasiib iyo kulamada qaar ka mid ah aadan u baahnayn in ay daruuri tahay in ay soo iibsadaan alaabta si loo horumariyo heerka ku xiga, laakiin waa in aad samir iyo raac xeerarka game`s ah.
Sanadkii la soo dhaafay, dadka isticmaala ku qaatay $ 10 bilyan ee Chine oo tanuna waa tiradii loogu talagalay oo keliya dadka isticmaala Apple yahay. Malaha waxaad tahay mid ka mid ah dadka iibsanaya iyo aad u yar tobanaan dollars ama waxaa laga yaabaa xitaa ka sii badan ku qaatay, boqolaal doolar. Dalal badan, Google Play Store samaynta lacag ka badan app dukaanka Apple. Sidaas darteed, aad fahmi karaa sida ay tiro badan oo ka mid ah lacagta waxaa loo isticmaali doonaa dhinacyada suuqa.
Laakiin, waxaad ka heli kartaa halkan qaar ka mid ah siyaabaha loo badbaadiyo lacag sidoo kale marka aad iibsato barnaamijyadooda android. Waxaad isticmaali kartaa Abaalmarinta Google Opinion u muteystay in qaar ka mid ah lacagta ama aan ka helo on Amazon ee App oo ah maalintii. Sidoo kale, waxaad qaadan kartaa faa'iido ay ku rakibidda iyo isticmaalka Chine in aynu aad u helaan lacag, dhibcood, kaararka hadiyadda, iyo sidoo kale waxaad kala soo bixi kartaa Chine oo lacag la'aan ah, kulan lacag la'aan ah la casriyeeyay, iyo dhameystiran sahan. By isticmaalaya noocan oo kale ah laga daadiyo, in kiisas badan oo aad abaal by Yeedha saaxiibadaa iyo shaqeystaan ​​oo 10% ama in ka badan oo ah dakhliga ay sida bonus. Tusaale ahaan in this category waa CashPirate app android.
Bal aynu eegno in faahfaahinta hadda sida aad u badbaadin karo lacag marka aad gadaneyso barnaamijyadooda android la hababka kor ku qoran:
Google Opinion Abaalmarinta
Ka dib markii aad ka soo dejisan iyo rakibi this app android, waxa aad bilaabi kartaa in aad qaadato sahan gaaban oo kala duwan oo ka jawaabi iyaga. The sahan iyo su'aalo la xidhiidha xaaladaada iyo tan sababta aad u baahan tahay in aad ka jawaabto su'aalaha aasaasiga ah oo ku saabsan naftaada halka isticmaalka hore ee app this. Waxaad heli doontaa sahan toddobaadkii ka Google Opinion Abaalmarinta mar, laakiin waxay ku xiran tahay in aad profile waxa aad heli kartaa baadhitaan hoose ama inta jeer ee sare. Si kastaba ha ahaatee, waxaad heli doontaa ogeysiin ku saabsan telefoonka markii baadhitaan uu diyaar u yahay adiga. Asal ahaan, dakhliga laga yaabaa in credits Play ilaa $ 1.00 ee dhamaystirka sahan. Fikradda waa in su'aalaha waa mid aad u fudud in aad ka jawaabto oo aad la wadaagi doonaa oo keliya fikradaada u gaar ah oo ku saabsan mowduuca, sida " Marka ma waxaad ku talo soo socota u safrin? " ama "Waa kuwee logo waa kan ugu fiican ". App waxaa wada sameeyey Sahamis Consumer Google oo loogu tala galay in ay waxtar u leh horumarinta iyo dadka isticmaala.
The App ee Maalinta on Amazon
Waxaad qaadan kartaa eegno maalin kasta ku Amazon iyo heli app lacag la'aan ah, si caadi ah u tilmaamay inay tahay "app maalinta". Oo wakhtigaas dadka kale, barnaamijyadooda ka this category leeyihiin qiimo iyo aad u isticmaali kartaa oo keliya iyaga oo iibsato. Laakiin haddii aad nasiib laga yaabaa in aad ka heli doontaa app in ahan inaad ee app maalinta feature. Mararka qaarkood waxaad badbaadin kartaa ilaa $ 100 ama ka badan oo ay sameeyaan raadinta this on amazon.
Ka dib markii aad ka soo dejisan iyo rakibi app, waxaad heli doontaa code gudbin in aad la wadaagi karto saaxiibadaa iyo lacag sida guddiyada / dhibcood ka shaqeysteen ah. Feature ugu muhiimsan waa in aad kala soo bixi kartaa oo isticmaali barnaamijyadooda lacag la'aan ah, oo ay ku jiraan kulamo badan. Xataa waxaad ka heli karo lacag adigoo buuxinaya sahan. Marka aad kasbatay 2500 lacagta birta ah, waxa aad awoodi kartaa inaad codsato heshay via PayPal ama hesho kaarka hadiyadda boostada.
> Resource > Android > 3 talooyin waa in aad ogtahay marka aad u iibsato Android Apps